Sidee looga fogaadaa dib u bilaabista wareegga iOS 9 ee Jailbreak | Wararka IPhone
Sida looga fogaado dib u soo celinta macruufka 9 loo yaqaan 'Jailbreak'
Dhibaatooyinku waxay ku xiran yihiin noocyada ugu badan ee Jailbreak, ma qarin doonno. Dabcan waayadan dambe waxay umuuqataa inay ka badanyihiin caadiga. Markan waxaan ula jeednaa milix «Kabaha Loox ee Dhimashada»Si ka wanaagsan oo loo yaqaan 'BLoD', oo ku dhacda iOS 9 iyo Jailbreak-keeda, cilladani waxay keenaysaa dad badan oo isticmaala macruufka iyo Jailbreak kii ugu dambeeyay oo ay is rogrogaan, bugkani waa xaalad dhacda marka qalabku bilaabo inuu dib u bilaabo si isdaba joog ah, aan joogsi lahayn, ilaa batteriga wuu dhammaadaa iyo wixii la mid ah intaad batteriga haysato, xal kale ma jiro oo aan ahayn soo celinta. Laakiin Actualidad iPhone waxaan kuu keenaynaa cashar lagu xaliyo khilaafkan si ku meel gaar ah.
Sida iska cad xalka waa soo celinta, laakiin ma lihin xulasho kale, iPhone gebi ahaanba wuu dhintay markay soo gasho xaaladdan, markaa ma hayno wax kale oo aan ku beddelno, waxaan ku keydin doonnaa xogta kaydinta, taas oo aan yareyn. Kuwani waa tallaabooyinka ay tahay inaan raacno.
Sida looga baxo Loop Reboot (BLoD) ee Jailbreak iOS 9
Ugu horreyntii, sidaan horayba u sheegnay, waan qaban doonnaa keyd aan la qarin qalabkeenna, si aan u keydin karno xogta. Si tan loo sameeyo, waxaan ku xirnaa aaladda PC-ga ama Mac-ga oo leh iTunes furan oo aan raacno talaabooyinka caadiga ah.
Waxaan dhigi doonaa telefoonka qaabka DFU: Si tan loo sameeyo, waxaan ku xiri doonnaa aaladda kumbuyuutarka iTunes furan, ka dib waxaan riixeynaa badhanka guriga + korontada muddo toban ilbiriqsi ah, tobanka ilbiriqsi ka dib waxaan sii deyneynaa badhanka korontada laakiin waxaan haysanaa badhanka bilowga illaa ay astaanta iTunes ka muuqato shaashadda iyo kumbuyuutarka ayaa lagu ogaadaa qalabka.
Guji dib u soo celinta qalabka, si aad ugu soo celiso macruufka 9.0.2
Marka dib u soo celinta la dhammeeyo, waxaan u qaabeyn doonaa sidii «qalab cusub«, Taasi waa sax, tallaabo aad muhiim u ah, kuma soo dari doonno qaabeynta iCloud ama TouchID.
Waxaan u soo dejisanaa Pangu nooca Windows 1.0.1
Waxaan sameynaa Jaibreak.
Waxaan ku bilaabi doonnaa Cydia taleefanka qaabka diyaaradda laakiin Wi-Fi firfircoonaan.
Waxaan ka rakibeynaa 'Cydia Substrate' keydka BigBoss oo waxaan sugeynaa nasashada caadiga ah inay dhacdo.
Markii la dhammeeyo, aaladda ayaan gebi ahaanba damineynaa oo aan mar kale daarnaa.
Hadda waxaan ku qasbi doonaa dib-u-soo-kabasho guriga + badhanka korontada muddo dheer.
Tallaabooyinkan illaa xarafka dhibkii dib-u-bilaabashada wareegga ayaa la waayey, hadda waa markaan sii wadi karno dib-u-soo-celinta kaydinta illaa iCloud adoo galaya xogteenna. Inkasta oo la soo saaray nooca cusub ee Pangu, kan ayaa ah midka kaliya ee caajis badan haddii aan rabno inaan dhibaatada ka fogaanno. Waxaan rajeyneynaa inay kuu adeegtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida looga fogaado dib u soo celinta macruufka 9 loo yaqaan 'Jailbreak'
Laakiin halkee ku aqrisay tan? Waxaan ula jeedaa qaladka. Sababta oo ah tusaale ahaan GSMSpain cidina ma soo sheegin dhibaatadan.
Aniga ayey igu dhacday
Ku jawaab saitam
Anigana waa igu dhacday Waxaa intaa dheer, ma soo celin karo gurmad ka iCloud ama iTunes. Waxay ii sheegaysaa in nuqulkii kaydka ahaa la musuqmaasuqay ama aan la taageerin.
Waad salaaman tihiin isla wixii igu dhacay ayaa igu dhacay, laakiin xalka ugu wax ku oolka badan ayaa ah in marka hore mobilka la damiyo ka dibna aad riixdo badhanka si aad u kordhiso mugga…. Iyo arrin la hagaajiyay
Ku jawaab Chris
Difaacayaasha Jeelka si ay u dhahaan iOS-ka ayaa xasiloon oo jabiya hahaha aniga waan partoooooo. Waxaa jira jilayaal jecel inay difaacaan waxa aan la diidi karin! in aad dhigi kartid chorraditas badan, haa ... laakiin halkaa laga bilaabo taasi waa mid deggan oo aan ku siinaynin dhibaatooyin adduun baa jira !!
Gebi ahaanba xasilloon intaad si taxaddar leh u dhaqmayso !!! Haddii aad rakibto bakhaarro halis ah oo aadan ku waalaan wax ka beddelka aanad xitaa isticmaalin, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato qalab gebi ahaanba deggan oo shakhsi ahaaneed oo aad jeceshahay.
Horeba ... sidaan xasilloonaa ... sug waan burburayaa oo ma qori karo hahahahahahahahaha ... ha dhihin arxandarro !!!
ha noqon nacalad u imaaneysa inaad ka cadhooto dadka kale hadaadan jeclayn JAILBREAK halkan waxaad u timid inaad ka fikirto tag golayaasha tufaaxa oo jooji fucking halkan
Xalka ugu horeeya waa in lagu bilaabo iphone-ka qaab amaan ah, tani waa mid riixaysa awood + guri ilaa iphone / ipad damiyaan marka uu daaranayana sii daayo badhanadan oo dhagsii mugga + ilaa iphoneku bilaabmayo, qaabkani ma shaqeynayo kalagoyn , ka dibna waxay u tagtaa cydia oo tirtirtaa khaladaadka dhibaatada keenay, ka dibna dami qalabka si aad mar kale u daarto, waxaana rajeynayaa in arrinta la xalliyey. Haddii tani aysan shaqeyn, markaa haddii ay tahay inaad dib u soo celiso, laakiin marka hore way fiicantahay inaad isku daydo inaad hagaajiso adigoon dib u soo celin. Maanta ka dib markii aan ku rakibey firfircooneeye, iphone-kayga wuxuu ku jiray wareeg aan dhammaad lahayn oo reboots ah waxaana awooday inaan ku xalliyo anigoo bilaabaya habka aaminka ah iyo ka saarista dhaqaajiyaha
ps activator wuxuu u shaqeeyaa si qumman iyo sida guriga macmalka ah sideen ugu noolaan karaa la'aantiis waa laba dhab ahaantii lama huraan ah iphone 6 oo lagu daray 9.0.2 dhibaato la'aan ilaa iyo hada iyo fikirka kor ku xusan iphoneku wuxuu noqon karaa mid si fiican u xasilloon inta aad ogtahay waxa lagu rakibo iyo maxaa maya ¬¬
Ku jawaab iMU
Wareeggu wuxuu igu dhacaa markaan isku dayayo inaan dhigo keydkii hore (iOS 8.4 oo leh JAILBREAK) adoo adeegsanaya iTunes dib u soo celinta aan sameeyay.
Waxaan isku dayay laba siyaabood:
macruufka 9.0.2 nadiif ah soo celinta - JAILBREAK - cydia subs updated - gurmad via iTunes - reboot joogto ah
macruufka 9.0.2 nadiif ah soo celin - gurmad via iTunes - reboot joogto ah (ma geli karo xabsiga)
Halkan laga bilaabo waxa kaliya ee aan cadeyn karo ayaa ah in keydkeyga via iTunes uu burburo sababo la xiriira wax aan ku habboonayn iOS9. Waxaan u maleynayaa inay jiraan xog laga soo diray JAILBILOOS kii hore oo lagu keydiyay nuqulka keydka ah iyo marka dib loo soo cusbooneysiinayo waxay burburaysaa nidaamkeyga.
Ra'yi kasta ama caawimaad si aad u awoodo inaad ku rakibto nuqulkii hore ee aan ku lahaa iOS 8.4? Hadda, nuqulada la adeegsado iCloud ayaa ii oggolaaday inaan haysto inta badan macluumaadka aasaasiga ah ee lagama maarmaanka ah laakiin iTunes-ka waxaan haystaa wax badan.
Ku jawaab niniking
Waad salaaman tihiin asxaabta, waxaan haystaa ipad2 oo waxaan ku hayaa loop, kama bixi karo halkaas, waligey iguma dhicin aniga iyo in aalado badan oo Apple ah ay gacmahayga soo mareen, laakiin sida qaladkan nolosha oo kale ah. Waxaan u diray chipspain.com si ay u dayactiraan waxna ma qaban karaan. Qofna ma garanayaa wax xal ah ???
Haddii ay wareegsan tahay, waa inaad ku dhejisaa DFU oo aad dib u soo celisaa.
Mahadsanid saaxiib, tan tan ayaan ku xaliyay dhibaatada.
Waxay dhacdaa in shalay aan galay Cydia waxaana jiray cusbooneysiin xasaasi ah (cydia installe, substrate, iwm) markii aan dhammeeyay rakibida waxaan dib u bilaabay 5s oo waxaa ii soo baxday in loo daayay wareegga. Ku soo celi macruufka 9.1 si aad u aragto sida ay u shaqeyso. Maanta waxaan go aansaday inaan dib ugu laabto 9.0.2 waxayna ii soo baxday inaan sidii caadiga ahayd sameeyay, dib u soo celiyay iPhone-kii, dib u soo celiyay keydkii, Jailbreak ayaan sameeyay waxaana soo baxday inay dib ugu laabatay wareeggii. Waxaan raacay talaabooyinkan horeyna waxaan dib ugu bilaabay taleefanka 2 jeer (haddii uu XD duubo) mana sii joogo. Mahad sanid saaxiib
Jawaab Jean Jean Rodriguez
Springtomize 3 oo ku saabsan inuu la jaan qaadayo macruufka 9
Dhaqdhaqaaqa waa la cusbooneysiiyay oo wuxuu hadda la jaan qaadayaa macruufka 9